दशैँमा पनि विदेशिने बढ्दै « Gaunbeshi
काठमाडौं, कात्तिक ५ । स्वदेश र गन्तव्य दुवैमा एकातिर कोरोनाको त्रास अर्को मुखैमा आएको दशैँको रौनक । यस्तो परिस्थितिमा पनि विदेश जाने लर्को बढ्दै छ ।
यस्तैमध्येका छन पर्वत कुस्मा नगरपालिकाका राजुप्रसाद सुवेदी । गत फागुनमा साउदी अरबबाट तीन महिनाको घर बिदामा आएका सुवेदी गत जेठमै जानुपर्ने हो तर कोरोनाका कारण उडान बन्द भएर रोकिए र उडान खुल्यो, बल्ल जान थालेका छन् ।
१६ वर्षदेखि साउदीमा आउने–जाने गरिरहेका उनले भने, “कोरोनाको बढ्दो त्रास र मुखैमा आएको दशैँ नमानी जाने रहर त कहाँ थियो र ? भर्खर घर बनाउँदै छु, ऋण लागेको छ, नगएर के गर्नु?”
उनीजस्तै कुवेत जान हिडेका चितवनका रामबहादुर केसीले विदेशको रोजगारी गुम्ने चिन्ताले मुखैमा आएको दशैँ छोडेर हिँडेको बताउँन्छन् । भिसाको म्याद पनि सकिँदै छ । कम्पनीबाट पनि अहिल्यै आउन भनेको छ, त्यसैले जान लागेको, निराश हुँदै उनले भने, “हामीले विदेशमा सिकेको सीप लगाउने कुनै ठाउँ छैन यहाँ ।
जहाँ पनि आफूले चिनेको मान्छे भए मात्र काम बन्छ । त्यसैले यहाँ केही गर्न सकिन्नजस्तो लाग्यो । ”रोजगारीको खोजीमा मलेसिया र खाडी मुलुकमा जानु धेरैको बाध्यता हो ।
गाउँमै, देशमै बस्दा पुग्ने भए किन परदेशिन पथ्र्यो होला र ? त्यसैमाथि एकातर्फ कोरोनाको त्रास अर्कोतर्फ मुखैमा आएको दशैँ छोडेर ।
गन्तव्य देशमा कोरोना जोखिम बढेपछि सरकारले गएको फागुन अन्तिमदेखि श्रम स्वीकृति रोकेको थियो । गोरखापत्र दैनिकबाट